Lasa repoblika vaovao indrindra manerantany i Barbados · Global Voices teny Malagasy
Tsy inona izany fa lojika amin'ny dingana fanafoanantsika ny fanjanahantany.
Voadika ny 04 Desambra 2021 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Português, Ελληνικά, Español, English
Sarin'ny sainam-pirenena Barbados sy UK avy amin'i Nicolas Raymond tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Efa hatry ny ela ny 30 novambra no nomarihana ho ny fetin'ny fahaleovantena tao Barbados, saingy hisy akony manokana mandrakizay ny fankalazana tamin'ity taona 2021 ity, satria io no andro nanoloan'ity firenena nosy Karaiba ity ny mpanjakan'i UK sy ny Commonwealth, amin'ny maha-filoham-panjakana azy.
Nitsahatra tsy ho filohan'ny fanjakana intsony ny Mpanjakavavy Elizabeth II tamin'ny misasakalina, ary i Dame Sandra Mason, governora jeneralin'i Barbados teo aloha, no lasa filoha voalohany tao amin'ny firenena, satria nampidinina ambaratonga tao amin'ny Kianjan'ny Mahery fo Nasionaly feno olona ao Bridgetown ny Royal Standard:
Nampidinina farany tao Barbados, naforitra, ary vonona haverina indray ho any amin'ny Satro-boninahitra Britanika ny Royal Standard. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny feon-kira mahazatra “Auld Lang Syne” (Raha hifandao isika izao).
Tamin'ny Septambra 2020, nanantitrantitra i Dame Mason fa dingana iray ilaina amin'ny dian'i Barbados mankany amin'ny fizakan-tena ny fahatongavana ho repoblika:
Tonga ny fotoana hialàna tanteraka amin'ny fanjanahantany taloha. Mila filoham-panjakana Barbadiana ny Barbadiana. Ity no fanambarana faratampony momba ny fahatokisana ny maha-izy antsika sy ny mety ho vitantsika.
Hita fa tena afa-po ho an'ny firenena ireo tompo tamin'ny fanjanahantany teo aloha tao Barbados: nandefa ny fiarahabany ny mpanjakavavy, ary nanatrika ny lanonana ny Printsy Charles, izay mankafy ny fifandraisana fiarahamiasa tsara amin'ny praiminisitra Mia Mottley:
Arahaba ? ho an'ny vahoakan'i #Barbados noho ny nahatongavany ho #Repoblika sy ny fanesorana ny mpanjakavavy #Britanika Elizabeth II tsy ho filohan'ny fanjakana taorian'ny 400 taona nanjakan'ny fanjanahantany. Nanatevin-daharana ny fanokanana ny filoha voafidy Sandra Mason izay ho filoham-panjakana vaovao ny Printsy Charles
Ho an'ny sasany, toa an'i Suleiman Bulbulia, mpanao gazety ao an-toerana izay nanoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny UK Guardian, “mahavokatra” ilay hetsika, maneho amin'izay ny fahafahan'ny nosy hanilika ny anaram-bositra “Little England” .
Ho an'ny praiminisitra Mottley kosa, dia tsotra toy ny fahatakarana izany fa “olona iray azon'ny zanaka Barbadiana tsiriritina ny filohan'i Barbados ankehitriny —ary tena mahery vaika tokoa izany”:
Satria miomana ho lasa #repoblika i #Barbados, dia niresaka tamin'i @miaamormottley aho mba hamantatra ny dikan'ny tetezamita ho an'ny firenena. Hanana fitantarana bebe kokoa isika ao amin'ny @BBCNews & @BBCWorld
Toy ny amin'ny fiezahana hanambara ny tenany amin'izao tontolo izao sy hanasongadinana ny zavatra vitan'ny Barbadiana, naseho feno ny herin'ny mpihira niaraka tamin'ny fanatrehan'ilay malazan'ny pop Rihanna, izay nomena ny anaram-boninahitra hoe Mahery Fo Nasionaly:
Tao anatin'ny fiderana sy lanonana, vao avy natao ho “Mahery fo nasionalin'i Barbados” i @rihanna
Faly tamin'ny sata vaovaon'ny firenena ireo mpiserasera media sosialy ao an-toerana:
Tongasoa eto amin'ny Repoblikan'i Barbados, taorian'ny fanandevozana 200 taona mahery sy ny fahaleovantena 55 taona, i Dame Sandra Mason no Filoha sy Loham-panjakana ankehitriny.
Na izany aza, nanamarika ny sasany fa fandrosoana voajanahary – sy efa nandrasana hatry ny ela be izany:
Mbola gaga ihany aho hoe nahoana ny fiovantsika ho lasa repoblika no mahasarika izao fientanentanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao. Tsy inona fa fehin-kevitra lojika amin'ny dingana fanafoanantsika ny fanjanahan-tany sy ny fihetsika tokony ho nitranga tamin'ny fahaleovantena izany.
Nandefa ny fiarahaban'izy ireo koa ireo mpiserasera ao amin'ny faritra, raha nanantena kosa ny hafa fa hanaraka izany ny fireneny:
Nandray dingana lehibe i Barbados ary nanao ny zavatra mety. Manantena aho fa hanaraka izany ny Bahamas indray andro any. ? #Barbados #Bahamas #Republic
Araka ny voalazan'ilay poeta Winston Farrell, izay novakiana tamin'ny lanonana, “Nitombo fahadalàna teo ambanin'ny Union Jack ny sasany, very tao amin'ny lapamandan'ny (volon-)kodiny.” Tamin'ny 30 Novambra 2021, nanambara ny tenany ho afaka ny Barbadianina.